Sida loo ogaado haddii haweeneydu ku jeceshahay: tilmaamaha iyo astaamaha ugu fiican | Ragga Stylish
Sidee lagu ogaadaa inaad jeceshahay naag. Waa mid ka mid ah waxyaabaha aan la ogeyn ee ragga ay badanaa ku shubeen cabsi uu ka qabo inuusan annaga naga jeclayn. Kahor intaadan qirin dareenkaaga qof, waxaa muhiim ah inaad ogaato inay ku jecelyihiin iyo in kale si aadan ugu dhicin diidmada. Waxaa jira caddayn qaar ka mid ah in haweenku dadka tusi karaan inay iyagu jecel yihiin.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno sida loo ogaado haddii haweeneydu ku jeceshahay iyo maxay yihiin tilmaamayaasha lagu ogaanayo.
1 Sida loo ogaado haddii haweeneydu ay jeceshahay saynis ahaan
2 Talooyin ku saabsan sida loo ogaado haddii aad jeceshahay inaad dumar noqoto
2.1 Luqadda jirka iyo wada sheekaysiga wanaagsan
2.2 Ka hadal naftaada oo muuji xiisaha
3 Seduction sida farsamo aan la tirtiri karin
Sida loo ogaado haddii haweeneydu ay jeceshahay saynis ahaan
In kasta oo ay umuuqato wax cilmi nafsi ahaaneed ku saleysan khibrad, saynisku xiriir weyn ayuu ku leeyahay xaaladaha noocan ah. Waxa ugu caadiga ah waa taas Waxaan soo bandhignaa dabeecadaha qaarkood ee caadiga ah markii qofku na jeclaado. Hadday tahay lab ama dhadig, kuwa doonaya inay horumariyaan xiriir kalsooni badan oo ay la leeyihiin qofkaas waxay u muuqdaan inay sameeyaan dabeecado qaar. Aasaasku waa in la barto waxa dabeecadaha ay yihiin oo la arko haddii, had iyo jeer, haweeney ay kula sameyso.
Soojiidashada ujeeddo shaqeynaya oo ka baxsan dhiirigelinta galmada waxayna kuxirantahay nooca qofka. Waa inaan ogaanno sida loo macneeyo macno walba maxay yihiin calaamadaha la dareemayo ee aysan ku koobnayn ujeedooyinka jacaylka. Tani waa sida aan ku baranno sida loo ogaado haddii aad jeceshahay inaad dumar noqoto. Calaamadaha qaarkood ee aad jeceshahay inaad dibadda u baxdo waa indho-qabasho, dareemid, dhoolla caddayn iyo qosol. Si kastaba ha noqotee, kuwani dhammaantood waa calaamado badanaa loo arko inay yihiin astaamo ay gabadhu ku jeceshahay, sida madaxa oo aad u janjeerto, dhinaca kale u janjeerto, dharka oo aad hagaajiso ama xijaabka taabato, xiriir lama laha. Waa sababta aanad naftaada ugu xidhiidhi karin dabeecadda noocan ah.
Talooyin ku saabsan sida loo ogaado haddii aad jeceshahay inaad dumar noqoto
Aan aragno maxay yihiin tilmaamaha dhabta ah ee sayniska ku saleysan si aad u barato sida loo ogaado haddii aad raadineyso naag.
Luqadda jirka iyo wada sheekaysiga wanaagsan
Luqadda jirka waa wax aad muhiim u ah in la tixgeliyo marka ay timaaddo in la ogaado in haweeneydu ay xiiseyneyso haa ama maya. Haddii aad u baqaan si furan oo go'an markii aad rabto, waxay noqon kartaa calaamadda xiisaha. Si la mid ah, haddii haweeneydaas oo eegaysa gacmaheeda iyo lugaheeda ay kala fidsan tahay taasi, macno la'aan, ayaa kuu furmaya. Haddii ay sameyso wax ka soo horjeeda, waxaa laga yaabaa in aysan dhab ahaan dareemin oo aysan kugu qanacsaneyn. Xiisaha kale ee jira ayaa ah ka jaleecista jaleecada, oo soo faragelisa indha indheynta ilbiriqsiyo yar ka dibna fiiriya. Caadi ahaan tani macnaheedu waa xiisaha adiga laakiin waa ku ceeb in aad sheegi karto.
Wadahadalka aad la yeelatay qofkaas wuxuu noqon karaa qodob xiiso leh oo laga fiirsado sida loo ogaado haweeneyda ayaa ku jeceshahay. Haddii, adoo fiiro gaar ah u leh wax kasta oo aad u sheegto, uu isku dayo inuu la falgalo si aad mar walba ugu sii sheegto isaga, waxay ka dhigan tahay inuu isagu xiiso weyn kuu qabo. Si la mid ah, markaad lahadlayso oo aad uyar mahadceliso ama kaftan yar oo ay qososho, waxaa laga yaabaa inuu xiiso weyn kuu qabo.
Haddii gabadhu aysan ku soo jiidan haba yaraatee, ma aha inay ku qososho waxyaabaha aad tidhaahdo sidoo kalena dan kama gasho waxaad leedahay. Waxyaabaha qaarkood waa inay u qalmaan bayaankan. Marka hore, ogow haddii qofka aad la hadlaysaa uu yahay saaxiibkaa. Sida iska cad, Haddii ay saaxiibkaa tahay, waxay xiisaynaysaa waxaad u sheegto. Waxay kaloo noqon kartaa inuu ku qoslo kaftanka aad sameyso, sida caadiga ah. Markii aan dhahno waxyaabahan oo dhan, waxaan ula jeednaa xaalado aadan aqoon naagta ama ay jiri karaan wax ka badan saaxiibtinimada.
Ka hadal naftaada oo muuji xiisaha
Qof adiga kaa daneeya oo isku daya inuu ku caawiyo ayaa laga yaabaa inuu ka helo. Gabadhu haddii aysan ku jeclayn, ku weydiin mayso sida ay wax u socdaan mana xiisayn doono markaad u baahato caawimaad ama dhibaatooyin. Halkan waxaan ku laabaneynaa si aan u caddayno dulucda asxaabta. Haddii uu si joogto ah u xiiseynayo noloshaada iyo dhibaatooyinka aad haysato in ka badan gabdhaha kale, waxay noqon doontaa maxaa yeelay wuu ku jecel yahay. Ka caawi wixii aan awoodo.
Mid kale oo ka mid ah dabeecadaha ugu caamsan ee laga helo dumarka jecel wiilka ayaa ka hadlaya adiga iyo saaxiibadood. Lahadalka asxaabta waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo lagu ogaan karo inay haweeneydu ku jeceshahay. Haddii asxaabteeda ay ogyihiin jiritaankaaga, adiga ayay ka hadlaysaa. Kaliya waa inaad wadahadal yar yeelataa si aad u hesho macluumaad badan. Macluumaadkani wuxuu muhiim u noqon doonaa in la arko tixgelinta ku hartay kooxdaada saameynta bulshada. Wiil aan soo jiidan ama daryeelin haba yaraatee uguma magac darto kooxda asxaabta.
Seduction sida farsamo aan la tirtiri karin
Arrin muhiim ah ayaa ah in la ogaado haddii goorta uu ku arki doono ama uu ogaan doono inaad meel joogto, in ka badan intii loo baahnaa ayaa la diyaariyey. Waa wax iska caadi ah inaad aragto qofka oo hal dhinac u labbisan, laakiin markaad ogaato inay u dhigmi doonto qofka aad jeceshahay, waxay dooneysaa inay soo jiidato dareenkaaga. Tan awgeed, waxaa loo qaabeeyey si ka badan sidii caadiga ahayd. Sidoo kale haddii ay isku daydo inay isku aaddo tagidda isla meelahaas in wax walba ay ku tusinayso inay adiga ku xiisaynayso.
Waxaa jira daraasado kala duwan oo ay sameeyeen culimada cilmu-nafsiga ee jaamacada Scottish-ka in Waxay xaqiijinayaan in karinta khaldan ee sasabashada ay tahay dhoolla caddeynta iyo indhaha. Waxaan dareemeynaa doorbid qof isha naga fiirinaya iyo in kala doorbididaan si dhib leh u kala duwaneyn hadii wajiga uu qurxoon yahay, xun yahay ama haduu faraxsan yahay ama xanaaqsan yahay. Dhaqanka reer Galbeedka waxaas oo dhami waxay u shaqeeyaan sidii dareen dabiici ah. Haddii indhahaagu fiirinayaan oo aan masaafo badani jirin, jidhkaagu wuxuu noqonayaa mid feejigan. Markaa ayaa jirku u turjumaa inay tahay calaamad muuqata oo sasabasho ah.
Noocyada noocan ah waxaad qarsoodi u tahay adrenaline, garaaca wadnahaaga ayaa dhaqso u dhacaya dhammaan dareemayaashaagana waa la hawlgeliyaa.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto waxyaabo badan oo ku saabsan sida loo ogaado haddii haweeneydu ku jeceshahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sidee lagu ogaadaa inaad jeceshahay naag
Xullo muraayadaha ugu fiican ragga xagaagan